Izindaba - 3M light box cloth cloth screen production, how to install 3M light box cloth
1. Indlela yokunamathisela eyomile yokuthi ungayifaka kanjani indwangu yebhokisi elikhanyayo
Eqinisweni, kungukunamathisela ngqo ifilimu kokuqukethwe okunamathiselwe, unamathisele unamathisele owomile, ibanga lokusakaza namanye amafilimu wokumaka amancane kakhulu. Kunconywa ukuthi kusetshenziswe ungqimba wephepha lokumisa elikhethekile ebusweni. Ungalidabuli lonke iphepha elisekelayo lezitikha ezomile, imvamisa kuyikona elilodwa kuphela. Beka isikhundla kuqala bese unamathisela amakhona ephepha elisekelayo, bese udonsa kancane iphepha elixhasayo ngesandla esisodwa, bese uklwebha kancane iphepha elingezansi ngesinye isandla. Qaphela ukuxhumanisa futhi ungasebenzisi amandla amaningi, ngaphandle kwalokho kuzodala imibimbi kalula. Vele, amandla akufanele abe mancane kakhulu, ngaphandle kwalokho azokhiqiza kalula amagwebu.
Qaphela: Indlela yokunamathisela eyomile idinga umphathi onekhono futhi oncomekayo, okungelula ukuyiqonda. Le ndlela ngokuvamile ayinconyelwa ifilimu yendawo enkulu.
2. Uyifaka kanjani indlela yokunamathisela emanzi yendwangu yebhokisi elikhanyayo
Sincoma ukuthi usebenzise indlela yokunamathisela emanzi, evikeleke kakhulu kunendlela yokunamathisela eyomile
1. Lungisa ibhodlela lesifutho elikwazi ukucindezela amanzi ngesandla bese ufaka okokuhlanza. Ngokuvamile, isilinganiso samanzi okugcoba emanzini singu-0.5%. Nyakazisa ibhodlela lesifutho ukuze ukhiqize amagwebu amaningi.
Qaphela: Kufanele kube ngaphansi kokuningi, ngaphandle kwalokho kuzoba namabhamuza amaningi amancane phakathi kwefilimu ne-veneer.
2. Jika iphepha elingezansi lefilimu libheke phezulu, kancane likhiphe iphepha elingezansi, bese ufafaza amanzi endaweni evulekile yenjoloba kaninginingi ngemuva kokudabula iphepha elingezansi, bese udlulisela ifilimu endaweni enamanzi. Ngalesi sikhathi, ifilimu ilahlekelwa ukunamathela kwayo futhi kungathatha isikhathi esifushane. Phakamisa ngaphakathi kuze kube yilapho ukuma kunembile.
Qaphela: Uma ifilimu inkulu, udinga abanye abasebenzi abazosiza ukudonsa ifilimu, bafafaze amanzi ezandleni zakho ngaphambi kokudonsa ifilimu, bese ufafaza amanzi ebusweni ukuze unamathiselwe.
3. Sebenzisa isinciphisi esikhethekile, okungcono isikrufu esinamaphethelo. Sula kancane enkabeni yefilimu ezinhlangothini zombili, kancane kancane usebenzise ingcindezi, bese uphinda okungenani izikhathi eziyishumi.
4. Bheka phansi bese uhlola ukuthi awekho yini amabhamuza asobala kwifilimu kuze kube yilapho amanzi angaphakathi esuliwe ngokuqinile.
Qaphela: Uma kunamagama kwifilimu, linda imizuzu engama-20-40 ngemuva kokukhuhla, bese uvumbulula amagama. Isikhathi sokulinda sinqunywa ngokuya ngezinga lokushisa elifanele. Uma isikhathi sifushane kakhulu, sizoshayela ezinye izingxenye ukuthi zihambe; uma isikhathi side kakhulu, kuzokwandisa ubunzima befilimu.